Qubanaha wararkii ugu dambeeyay Iran (Tallaabo dhif & naadir ah) – Maanta Online
Dowladda Islaamiga ah ee Iiran ayaa bilowday tallaabooyin ka dhan ah dowladaha xulafada la ah Mareykanka, iyadoo maanta xabsiga dhigtay Robert Macaire safiirka Britain u fadhiya magaalada Tehran, kaasi oo lagu eedeeyay inuu qeyb ka ahaa dibadbaxyada looga horjeedo xukuumadda hoggaamiyaha dalkaasi Hassan Rohani.
Wararka ayaa sheegaya in safiirka Ingiriiska lagu guuleystay daqiiqado in xabsiga laga sii daayo, iyadoo dowladda Iiraan ku amartay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan dalka uga baxo.
Dowladda Iran ayaa sheegtay sharciga caalamiga ah “persona non grata” in safiirka ku xadgudbay diblomaasiyadda dalkaasi, kaddib markii la arkay sawirada isaga oo ku sugan goob ay ka dhacayeen dibadbaxyada xukuumada dalkaasi looga soo horjeedo ee maalmahani ka dhacayay magaalooyin ka tirsan dalkaasi.
“Ma aha wax la aqbali karo weerarka diyaaradda lagu qarxiyay ee ka dhacay Tehran, waana lala xisaabtamayaa kuwii ka dambeeyay” ayuu yiri madaxweyne Rooxaani oo shalay jeediyay khudbad uu ku dejinayay dadweynaha dalkaaso ee ka carooday qaladka lagu laayay ku dhowaad 200-ruux oo saarnaa diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine.
Hassan Rohani ayaa sheegay in eeda ugu dambeysa ee qaladkaasi ka dhacay ciidamada dalkiisa mas’uuliyadda ugu dambeysa uu leeyahay dalka Mareykanka oo ciidamadiisa ku dileen dalka Ciraaq Jan. Qaasim iyo saraakiil la socotay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq.
← Guddoomiye Ku xigeenka aqalka sare oo ganafka ku dhuftay sharci muhiim ah
Qas wadayaashii u yaacay gobolada dhexe oo ceeb iyo lama arag kala kulmay Dhuusamareeb! →